Izithombe eziyi-10 ezithakazelisayo ezithathwe ngekhamera efihliwe ngasekupheleni kwekhulu le-19 - Indlela yokuphila 2022
Izithombe eziyi-10 ezithakazelisayo ezithathwe ngekhamera efihliwe ngasekupheleni kwekhulu le-19
Izithombe zekhamera ezifihliwe ze-Retro e-Oslo ziyamangaza!
UKarl Stermer wafunda izibalo e-Queen's University Federica (University of Oslo - ed.) Futhi, ngaleso sikhathi, wayenomsebenzi wokuzilibazisa ongavamile - wasebenzisa ikhamera efihliwe eyakhelwe ejazini lakhe ukuze athwebule abantu emigwaqweni yase-Oslo.
Nakuba aziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe wethiyori yezinombolo kanye nocwaningo lwakhe nge-aurora borealis, uthando lwakhe luyaphawuleka.
Lena yindlela ikhamera kanye no-Stermer ngokwakhe ababheka ngayo ekupheleni kwekhulu le-19. Ngokuvamile, uKarl wayedubula lapho othile kwabadlula ngendlela embingelela. Ngakho, umfana wathatha izithombe ezingaba ngu-500.
Ezithombeni zakhe, ungabona ngokucacile imfashini yalezo zikhathi.
Yeka isigqoko esihle sale ntokazi.
Hamba nengane nenja.
Okunye ukubingelela - esinye isifinyezo!
Kulesi sithombe, kubukeka sengathi u-Karl wehlisiwe.
Izingane emigwaqweni eyihlane yase-Oslo.
Le ndoda ijabule ngokubona uKarl futhi ayinalo ulwazi lokuthi imqopha ngekhamera efihliwe.
UKarl wayethanda ukuthatha izithombe zabesifazane kangcono.
Yehlisa isisindo kalula: Izizathu eziyi-7 zokuqala ukuhamba nge-Nordic
Kaningi emigwaqweni kuba khona abantu abahamba bematasa ngezigxobo ezimbili ezifana nokushushuluza. Kodwa ukushushuluza kuyingxenye kuphela ehilelekile lapha, ngoba sikhuluma nge & hellip; ukuhamba kwe-nordic
Izinto eziyi-10 ezenqatshelwe ngesikhathi seLent
Thola ukuthi yini ongayenza futhi ongakwazi ukuyenza ngesikhathi seLenti. Iqala nini iLent 2021, izohlala isikhathi esingakanani futhi ngani
Umshado wango-2020: Izitayela ezi-5 ezintsha ezithakazelisayo